ရင်သားကင်ဆာကုသရန် Nolvadex ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
Nolvadex 1.What ပါသလဲ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?2။ Nolvadex အသုံးပြုမှု
3.Nolvadex သောက်သုံးသော 4.Nolvadex ရလဒ်များကို
5.Nolvadex ဝက်ဘဝ 6.Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
7.Nolvadex အကျိုးကျေးဇူးများကို 8.Nolvadex ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ရောင်းရန် 9.Nolvadex အမျိုးသမီးအတွက်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ 10.Nolvadex
1. Nolvadex ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
ယခုအချိန်တွင်မှာရင်သားကင်ဆာအမျိုးသမီးတွေထဲကနေဆင်းရဲခံရသောအရှိဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသနအများကြီးပြုမိခဲ့ကြခြင်းနှင့်နေဆဲတစ်ခုကင်ဆာ-အခမဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ကူညီနိုင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်ပြုမိနေပါသည်။ Nolvadex (54965-24-1) ရင်သားကင်ဆာ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြသောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း၏တတ်နိုင်ပါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင်နေရာတစ်နေရာရရှိကြောင်းထက်အခြား။
Nolvadex (54965-24-1) ဇာတ်စင်ကင်ဆာချီတက်ကြသူလူနာကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတစ်ဦးပါးစပ်ဆေးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 1966 ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ကင်ဆာကုသမှုကိုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်င်း၏လေ့လာမှု 1970 စတင်ခဲ့သည်။ 1998 မှာ, ရင်သားကင်ဆာကိုတားဆီးကူညီနိုင်ရန် FDA ကထံမှခွင့်ပြုချက်ရရန်ပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သုတေသန Nolvadex ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာရှိနသောသူအမျိုးသမီးများအတွက် 50% အားဖြင့်ရင်သားကင်ဆာခံစားနေရပြီး၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချကြောင်းပြသပြုမိ။
Nolvadex ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှ, သင်ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်တွေကြီးထွားများပြားမှအီစထိုဂျင်အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အမျိုးသမီးဟော်မုန်းလိုအပ်ကွောငျးသိရသင့်၏။ ဆေး Tamoxifen ထို့ကြောင့်အဆိုပါရင်သားကင်ဆာဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ receptors အီစထိုဂျင်မှ binding အတွက်အီစရိုဂျင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်ဒီတားဆီးရန်တတ်နိုင်သည်။
Nolvadex (54965-24-1) တရားဝင်တစ်ဦးရွေးချယ်အီစရိုဂျင် receptor modulator တွေကို (SERM) အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာထို့ကြောင့်ရင်ပတ်ထဲမှာအီစထိုဂျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားခြင်းနှင့်မျိုးပွားလျော့နည်းစေသည်။
ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်တွေထဲမှာအီစထိုဂျင်တိုက်ခိုက်နေကြောင့်လည်းမိတ္တူအီစထိုဂျင်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအပြုသဘောသက်ရောက်မှု Nolvadex ထက်အခြား။ ဆေး Tamoxifen အပေါ်နေသောသွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးသည်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးကိုခံယူစရာမလိုဘဲ (ထိုဖြစ်စေသည်တဲ့အခွအေနေအရိုးပိန်စေပါတယ်) သည်နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်အဖြစ်အရိုးပွရောဂါလျော့ကျစေနိုင်သည်။
2. Nolvadex အသုံးပြုမှု
Nolvadex အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများ၏ကုသမှုထဲမှာအသက်အရွယ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့တသက်တာမှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါခံစားနေရပြီးယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်အများစုနဲ့ကယ်တင်သောသခင်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာတချို့ရှိနေပါတယ် Nolvadex အသုံးပြုမှု ကထွက်မတ်တပ်ရပ်စေပြီ;
သူတို့တစ်တွေအောင်မြင်သောခွဲစိတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြုသဘောဆောင်တုံးမှာတက်စေ့ node ကိုသို့မဟုတ်တုံးမှာတက်စေ့ node ကို-အနုတ်လက္ခဏာရင်သားကင်ဆာကုသအဖြစ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခံရ Nolvadexmay ။ Nolvadex အသုံးပြုမှုကိုအပြုသဘောအီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်း receptors ရှိကြောင်းကင်ဆာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တဲ့အခါမှာပိုပြီးအကျိုးရှိဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ Nolvadex ဆန့်ကျင်ဘက်ရင်သားကင်ဆာမှလွှဲပြောင်းကင်ဆာ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။
သွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ (ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်ကင်ဆာ) ရှိသည်သောယောက်ျားမိန်းမတို့ Nolvadex နှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
situ အတွက် ductal carcinoma ကနေဆင်းရဲခံရသောအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (DCIS) နှင့်အဘယ်သူသည်ပြီးသားခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ကြပြီးဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးလည်းဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကနေအကြိုးခံစားစေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုးဖောက်ရင်သားကင်ဆာခံစားနေရပြီး၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျ Nolvadexmay ။ ဒီကုသမှုရှိခြင်း၏အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်, သို့သော်, ကြိုတင်ဆွေးနွေးတင်ပြရပါမည်။
ရင်သားကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာနေသောအမျိုးသမီးများသည်လည်းရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေတန်ပြန်ကူညီပေးဖို့မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောနိုငျသညျ။ ဒီကုသမှုရှိခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်, သို့သော်, ဤကိစ္စတွင်တှငျဆှေးနှေးထားရမည်။
သားအိမ်ကင်ဆာကုသမှု usesin အဆိုပါဆန်း Nolvadex တစ်ခုမှာ။
3. Nolvadex သောက်သုံးသော
အဆိုပါ Nolvadex သောက်သုံးသောကြောင့်အလုပ်လုပ်ဘို့အလွန်မြင့်မားသောဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအနိမ့်သောက်သုံးသောမှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အစွမ်းထက် SERM ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကုသမှုများအတွက်ပုံမှန် Nolvadex သောက်သုံးသော နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်သော 10-20mg ဖြစ်ပါသည်။
Anti-အီစရိုဂျင်နှင့်လိုလားသူ testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုအဘို့, Nolvadex သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 10-40mg အကြားဖြစ်သင့်တယ်။ သငျသညျရှေးခယျြအဆိုပါသောက်သုံးသောသင့်ရဲ့အရွယ်အစား, ပန်းတိုင်, သင်ကပေါ်ဖြစ်ချင်တယ်အချိန်ပမာဏပေါ်မူတည်ပါသည်။
ဒါဟာပိုမိုမြင့်မား Nolvadex သောက်သုံးသောပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမဆိုလိုပါသတိပြုပါရန်ကောင်းလှ၏။ အဆိုပါ 10-40 မီလီဂရမ်သင်ဟို steroids ယူပြီး၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများလျှော့ချအတွက်လိုအပ်မယ့်သိသိသာသာမြန်ဆန်သက်ရောက်မှုကိုငါပေးမည်။
Nolvadex ၏အုပ်ချုပ်မှုပတ်သတ်ပြီးအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းမရှိအထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရှိပါတယ်။ ဒါဟာမတိုင်မီအပြီး, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်ကာလအတွင်းဖြစ်စေယူရန်သင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနံနကျအခြိနျ၌ဖြစ်စေညဥ့်အချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်စေကြောင့်လည်းရှိတယ်နိုင်ဘူး။ တခါတရံသူကသင် Nolvadex သောက်သုံးသောခွဲမထားသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
4. Nolvadex ရလဒ်များကို
ကင်ဆာကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် Nolvadex ရလဒ်များကိုသည်အခြားကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအကောင်းဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်။ ရလဒ်များထိုးဖောက်နှင့် Non-ထိုးဖောက်နှစ်ဦးစလုံးရင်သားကင်ဆာကုသခဲ့ကြသူအမျိုးသမီးတစ်ဦး 50% လျှော့ချရေးပြပါ။ ငါးနှစ်မှဆယ်နှစ်ကြားတဲ့ကာလအဘို့ပြုလုပ်တာကိုအတူတူရင်သားကင်ဆာနှင့်လည်းကူးစက်တဲ့အခြားရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်ကို၏ reoccurrence လျှော့ချရန်သက်သေပြခဲ့သည်။
Nolvadex ကိုလည်းတားဆီးကာကွယ်ရေးမူးယစ်ဆေးအဖြစ်နှင့်တူ၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းကုသမှုအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး gynecomastia ၏ကုသမှုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကြောင့်စေသည်။ တလတွင်တဆယ်လူနာအပေါ်ပြုမိကျပန်းလေ့လာမှုမှာတော့သူတို့ထဲကခုနစျပါးဟာသူတို့ရဲ့ရင်သားရဲ့အရွယ်အစားအတွက်ကျဆင်းခြင်းခံစားခဲ့ရသညျ။ နာကျင် gynecomastia ခံစားခဲ့ရသူကိုသူတို့အလေးတချို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတယ်။ သတင်းပို့ခြင်းမရှိအဆိပ်အတောက်ရှိခဲ့သည်။
ကလေးပတ်အကြာတွင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သတင်းပို့ထားပါတယ်ကြောင့်လည်း testosterone ထုတ်လုပ်မှု၏ဆွအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုပေးထားပါတယ်။
5. Nolvadex ဝက်ဘဝ
အဆိုပါ Nolvadex ဝက်ဘဝ အတော်လေးရှည်လျားသည်အခြားပါးစပ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဒါဟာ Nolvadex ဝက်ဘဝတိုင်အောင်တဆယ်လေးရက်ပေါင်းသကဲ့သို့ရှည်လျားသွားနိုင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအချို့လေ့လာမှုများနှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငါးမှခုနစ်ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
6. Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Nolvadex ထက်ပိုငါးဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီး, အံ့ဩစရာမရှိကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ bit နဲ့လုံလောက်စွာကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ်ထားပါတယ် Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကြောင်းတန်ခိုးဒုက္ခသငျသညျ။ ဒါဟာသို့သော်သင်ကယူပြီး start တခါ, သင် Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံယူဖို့ရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချိန်အများစုမှာ, သင်သည်ထိုသူတို့မဆိုခံစားနေရဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
မကြာခဏဆိုသလို, အ Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့စတင်ခြင်းနှင့်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသူတို့ထံမှခံရပါလိမ့်မယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြသည်။ ဒါဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမြဲ Reversible လုပ်ဖြစ်ကြပြီးသင်ကုသမှုနှင့်အတူပြုတစ်ချိန်ကအမြဲသွားသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းကျိုးနပ်သည်။
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့သင်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့အခြေအနေများအောက်တွင်ပြင်းထန်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်, သင်အပြောင်းအလဲတချို့လုပ်သဖြင့်သူတို့အ minimize သို့မဟုတ်တားဆီးနိုင်ကြောင်းလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာပါဝင်သည်;
ဘယ်သူမှသင်ကောင်းစွာကြောင့်လုပ်နေတာပြီအထူးသဖြင့်လျှင်, အိပ်ရာမှာညံ့ဖျင်းဖျော်ဖြေဖို့လိုသည်။ အဆိုပါ Nolvadex အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးက testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးပွါးကြောင်းသော်လည်း, ကလည်းတဦးတည်းရဲ့လိင် drive ကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရေးအခြားသူတွေအဘို့, က Non-တည်ရှိဖြစ်လာနေစဉ် Nolvadex သုံးစွဲသူအချို့ကိုအနိမ့်လိင်စိတ်၏ညည်းညူကြောင်းပြသပြုမိ။
ဆံပင်ဆုံးရှုံးတဲ့နာကျင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, က Nolvadex ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပုံမှန်ဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုလိုအပ်သော Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်;
(ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများထွက်သယ်ဆောင်ပေးနိုင်မပါ) စိတ်ဓာတ် Feeling
ရောင်ရမ်းခြင်း, နာကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်သို့မဟုတ်လက်မောင်းတနီခြင်းနှင့်အခြားမဟုတ်
7. Nolvadex အကျိုးကျေးဇူးများကို
ကလူအများကြီးဟာပြင်းထန်ခွအေနအေအဖြစ် gynecomastia သို့မဟုတ်လူတ Boob မမြင်မိပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်သဘောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယောက်ျားအတွက်ရင်သားတစ်သျှူးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, ကစတီရွိုက်၏အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနဲ့တူအချက်တွေကြောင့်တဦးတည်းရဲ့ဟော်မုန်းအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အီစထိုဂျင် / testosterone ဟော်မုန်းအချိုးအစားတစ်ခုတိုးဦးဆောင်အကြောင်းမရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါအီစထိုဂျင်သို့မဟုတ်အန်ဒရိုဂျင် receptor interaction ကမှတဆင့်အနေနဲ့တိုးမြှင့်အီစထိုဂျင်သို့မဟုတ်လျှော့ချအန်ဒရိုဂျင်ဆွအကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကနေခံစားနေရပြီးအမျိုးသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့မြင်ကြဘူးမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးထက်အခြားသောကြောင့်မိမိကိုယ်ကို seclude လိုသော၏အချက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ တောင်မှပိုဆိုးပါကတဦးတည်းရေကူး, ဆိုလိုသည်မှာဤအရပ်မှအဆမတန်ကြီးမားရှပ်အင်္ကျီအဘို့အသွားသူတို့ကိုဖုံးကွယ်နှင့်သူတို့၏အလောင်းများကိုဖော်ထုတ်နိုင်လှုပ်ရှားမှုများရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားစေနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်, ဒီအခြေအနေနှင့်အတူယောက်ျား၏စာရေးတစ်ဦးတည်မြဲဖြေရှင်းချက်များအတွက်မြျှောအပေါ်အမြဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါကောင်းသောအရာ, အတစ်ခုဖြစ်သည် Nolvadex အကျိုးကျေးဇူးများကို ဒါကြောင့်တဦးတည်းပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံယူအောင်မပါဘဲကွီးကွပျမှူးရင်သားကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Nolvadex ထို့ကြောင့်အဆိုပါ gynecomastia ဖြစ်ပွားမှုတချို့၏ကုသမှုအတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်သော option ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြွက်သားထုထည်ရရှိမှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်မခက်ခဲပုံရသည်။ သငျသညျ၏ဟုမေးကြောင်းအားလုံး, အလေးရုတ်သိမ်းပေးရန်ညာဘက်အစားအစာပေါ်ဖြစ်သဖြင့်, အကောင်းဆုံးကာယဗလဖြည့်စွက်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကုန်းထိမှန်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သောအရာကိုအံ့ဩရှိပါသလား? သင်ကထဲကဖမ်းယူဖို့လိုအပျလြှငျအသငျသညျအရာထုတ်ကုန်သုံးနိုငျသလဲ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်သလဲ?
Nolvadex ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သင်သည်သိသိသာသာသင့်ရဲ့ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကတစ်ဦးလက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာဦးနှောက်ထဲမှာ hypothalamus နှင့် pituitary gland ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်ဒီပါဘူး။ ဒါကထို့နောက်ဝှေးစေ့များက testosterone ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်သော follicles စိတ်ကြွဆေးဟော်မုန်း (FSH) ၏ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ် Luteinizing ဟော်မုန်း (LH) တွင်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်။
လူတဆယ်ရက်များအတွက် 20mg Nolvadex ကြာလျှင်စာရင်းအင်း, သူတို့၏အသွေး၌ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို 41% အထိတိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိသည်။ ခြောက်ပတ်အတွင်းအတွက်အသုံးပြုလျှင်, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် 84% သကဲ့သို့မြင့်မားသွားနိုင်။
testosterone သူ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုယ်ခန္ဓာ၌သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြားအခန်းကဏ္ဍတို့တွင်အကြွက်သားပရိုတိန်း၏ပေါင်းစပ်တိုးတက်အောင်အတွက်ကူညီပေးသည်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်လိမ့်မည်။ ဒီတန်ပြန်ရန်, သင် testosterone ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ Nolvadex အသုံးပြုနိုင်တယ်။
Nolvadex, non-တီးရွိုက် SERMs တစ်ခုဖြစ်သည်ဤအရပ်မှအီစထိုဂျင်နှစ်မျိုးလုံးရန်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစထိုဂျင် agonist သက်ရောက်မှုထားပါတယ်။ အချို့အတွက်က antiestrogenic သက်ရောက်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်နေချိန်တွင်အချို့သောဒေသများအတွက်ကြောင့်အီစထိုဂျင်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများတစ်ခုမှာ testosterone ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုအတွက်တိုးလာသည်။ ဒါဟာအစခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစရိုဂျင်၏ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေသည်။
ဒါဟာတဦးတည်း post ကိုသံသရာကုထုံးဆောင်ရွက်ရန်လိုလျှင် Nolvadex တစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စဉ်းစားသောဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးဟို steroids သံသရာလည်ပတ်နေပြီးနောက်သူတို့အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းနိုင်သောကွောငျ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရလဒ်အနေနဲ့တဦးတည်းကသင်၏အကျိုးအမြတ်ဖြုန်းဖို့ go ဆိုလိုတာကလူ Boob ရရှိနိုငျသညျ။ အီစထိုဂျင်ဟန့်တားခြင်းအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပင်လယ်အော်မှာသိုထားနေကြသည်။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် Nolvadex အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ပုံမှန်ပြန်သွားဖို့အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
အများအားဖြင့်, Nolvadex အပေါငျးတို့သဟို steroids တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရှင်းလင်းခဲ့ကြချက်ချင်းပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သည်။ တဦးတည်းလေးခြောက်လမှရက်သတ္တပတ်နေ့စဉ် 20-40mg ယူသင့်ပါတယ်။ ထက်ပိုမိုမြင့်မားမဆိုငွေပမာဏမဆိုပိုပြီးသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုပူဇော်မထားဘူး။
ရာခိုင်နှုန်းစဉ်အတွင်း Nolvadex ထိုကဲ့သို့သော hCG သို့မဟုတ် Aromasin ကဲ့သို့ aromatase inhibitor အဖြစ်ကအနည်းဆုံးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကို testosterone လှုံ့ဆော်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူအုပ်ချုပ်သည်။ အတူတူသူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်သက်ရောက်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် HPTA function ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျ testosterone ဖိနှိပ်မှုတန်ပြန်မှာရည်ရွယ်ထားလျှင်အများဆုံးဖွယ်ရှိအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေကြောင့်သံသရာစဉ်အတွင်း Nolvadex များအသုံးပြုမှု, သို့သော်, ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ သင့်ငွေယိုစီးဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုနိုင်ဘူး။
တချို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမတူဘဲ, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးယခုကောင်းသောရှာဖွေနေဖို့လက်မှတ်တွေတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ လည်ပင်းအလေးချိန်ကိုသင်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်လိုဆိုလိုနိုင်ဆုံးရှုံး, လှည့်ရှိခြင်းထက်အခြား။ အပိုကယ်လိုရီသွန်းသို့သော်တစ်ဦးလွယ်ကူသောကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သင်၏အလေးချိန်အရှုံးခရီးအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာ Nolvadex ၏အသုံးပြုမှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
လေ့လာရေးအပေါ်ပြုမိ Nolvadex ရလဒ်များကို ကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအများစုအလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှပံ့ပိုးနှင့်အတူထိရောက်သောကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Nolvadex သည့်အခါဇီဝြဖစ်ကန်ဘောများတွင်ပိုမိုအဆီကိုမီးမရှို့ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကူညီနိုင်စွမ်းရှိသည်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုအတွက်တိုးလာဤအရပ်မှတစ်ဦးတိုးတက်လာသော lipolytic function ကိုစေပါတယ်။
အတူတူ Clenbuterol အတူသူတို့ triglyceride ၏ဇီဝြဖစ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအင်ဇိုင်းကြောင်းလစ်ပိုပရိုတိန်း lipase လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ နှစ်ဦးစလုံးထိုကြောင့်, ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးဝါးအဖြစ်ပြုမူနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင် Nolvadex အဆီကိုမီးမရှို့ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများနှင့်လည်းအဆီလည်းမီးလောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းစွမ်းအင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က function ကိုခိုင်မာစေ
ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏စကားပြောတဲ့အခါ, ကျနော်တို့ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်နာမကျန်းဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းကိုရည်ညွှန်းကြသည်။ အများအပြားမှအမည်မသိ, Nolvadex တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
8. Nolvadex ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အလက်ဇန္အမ်ငါလွန်ခဲ့သောခြောက်လခန့်ထွက်သည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲများကိုသလောက်ကျွန်မမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ကြ "လို့ပြောပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ကြွက်သားထုထည်တိုးမြှင့်မယ်လို့တစ်ခုခုရှာဖွေနေစတင် Nolvadex များအတွက်အခြေချခဲ့သည်။ အဆိုပါ Nolvadex ရလဒ်များကိုရုံစိတ်ကူးရှိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ကြွက်သားထုထည်မှာရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးပွားလာခဲ့ပါသည်, ဤထုတ်ကုန်အတူတူပင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရပါမည်တူသောငါခံစားရတယ်။ ငါပိုကြီးကြွက်သားရှိသည်ဖို့ရှာနေမဆိုလူတစ်ဦးကချီးမွမ်း။ "
ပြစ်ကိလ K သည်သုတေသနအများကြီးပြီးနောက် "ဟုဆိုငါ Nolvadex အကျိုးကျေးဇူးများကိုများထဲမှအလေးချိန်အရှုံးကြောင်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကကြိုးစားရန်မစောင့်နိုင်, ချက်ခြင်းငါဒီမှာအမိန့်; ငါတစျနေ့၌ငါ့အထုပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မတစ်ဆယ်ကီလိုဂရမ်ကိုဆုံးရှုံးပြီ, ငါသည်ဤပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာယခုပငျငါ့သွားလာရင်းမှအရှုံးမူးယစ်ဆေးအလေးချိန်ဖြစ်လာသည်, ငါ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုလည်းကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်။ ငါကအခြားကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးသောအခါငါရှောက်သွားသောအရာကိုမတူဘဲယခုအချိန်အထိမည်သည့် Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ခံစားခဲ့ရကြပြီမဟုတ်။ သင်သည်ခံရဖို့ရှိသည်သင့်ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးမပါဘဲတချို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သွန်းလောင်းချင်လျှင်, Nolvadex သင်တို့အဘို့အသွားသင့်အဘယျသို့ဖွစျသညျ။ "
Leila Wagner ပဲပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါ၏အ Nolvadex အံ့ဖွယ်လက်ခံရရှိ "လို့ပြောပါတယ်။ အံ့သြကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရသောအံ့ဖွယ်? ကံမရှိဘဲလွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်အဘို့ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်, ငါနောက်ဆုံးတော့ Nolvadex ၏အကူအညီဖြင့်အပြုသဘောစမ်းသပ်ပြီး, ငါယခုဝမ်းမြောက်ခြင်းငါ၏အစုအဝေးကိုကိုင်ပြီးနေပါတယ်။ ငါအသုံးအနှုန်းကသယ်ဆောင်ရန်တတ်နိုင်ဖြစ်နိုင်လျှင်သေချာမသိခဲ့, ငါနောက်ဆုံးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ငါမယုံသေးသဖြစ်ကြောင်းကို, ငါပဲ, ငါ၏ကလေးအံ့ဖွယ်အမည်ရှိ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ထားပြီးသူမည်သူမဆို Nolvadex တစ်ဦးပါပေးသင့်တယ်။ "
Cassie ဟူစတန်သူစတီရွိုက်အသုံးပြုမှုကြောင့်ရင်သားဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ခဲ့ပြီးမိသောကြောင့်ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်းဘို့ဒီထုတ်ကုန်အမိန့် ", ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာသူပင်ကြောင့်အရှက်၏နေမကောင်းခွင့်ယူတာသူ့ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ မိမိအလိင်စိတ်အရမ်းနိမ့်ခဲ့, ကြှနျုပျတို့မရှိတော့အတူတကွဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ဒီထုတ်ကုန်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်သူသည် Nolvadex ရလဒ်များကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ အရာအားလုံးယခုပြောင်းပြန်ထားပြီး, သူသည်နောက်ကျောကပုံမှန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Boob သိသိသာသာလျှော့ချကြပါပြီ, သူသည်နောက်ကျောအလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလိင်စိတ်အရမ်းယခုမြင့်မားသည်။ ငါသည်ဤသည်သင်၏ testosterone တစ်ဦးထပ်တိုးပေးမည်ကိုအကောင်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
9. ရောင်းရန် Nolvadex
သငျသညျဖို့လိုပေမည် Nolvadex အမှုန့်ကိုဝယ် တစ်ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်သို့မဟုတ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်။ ဒါ့အပြင်သင်ပိုကြီးကြွက်သားရှိခြင်း၏လိုက်စားအတွက်ဖြစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအချို့အလေးချိန်ရဖို့ရန်လိုပေမည်။ သင်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရှိရာအဓိကမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်?
သူတို့ Nolvadex အမှုန့်ကိုဝယ်နိုင်မည့်လူတွေကိုမေးသောအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကဝယ်ယူပေမယ့်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ကောင်းစွာ-စျေးနှုန်းတစ်ခုမရသာ။ သင့်ထံမှမဝယ်နိုင်သောများစွာသောအွန်လိုင်းနည်းလမ်းရှိပါတယ်ဆင်ခြင်, သငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းကို Nolvadex ကမ်းလှမ်းသောတဦးတည်းသေချာမဖွစျနိုငျသညျ။
သင်သည်လက်ျာအရာ purchasing ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေခြင်းငှါ, သင်တို့ကိုမဝယ်ရွေးချယ်နိုင် ရောင်းရန် Nolvadex ကျွန်တော်တို့ဆီက။ သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကပြန်လည်ရောင်းချခြင်းလျှင်သင်တို့သည်လည်းမျှတသောစျေးနှုန်းမှာအမြောက်အများအတွက် Nolvadex မဝယ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါကောင်းသောအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nolvadex အတူကနေအစာအိမ်ကိုက်ခဲသို့မဟုတ်အဆိပ်ရတဲ့၏အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေရှိကွောငျးဖြစ်၏ ဒါဟာအမှန်တကယ် Nolvadex ဖြစ်ပါတယ်။
10 ။ အမျိုးသမီးအတွက်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ Nolvadex
ဒုက္ခထင်နှင့်ခံစားမှုရှိခြင်းတက်အလေးပေး? မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ စာရင်းအင်းအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဝှမ်း 7% ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိစ္စများရှိသည်ပြသပါ။ ဒါဟာသို့သော်တဦးတည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်လျှင်မိမိတို့ကလေးကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောအဓိကပြဿနာတစ်ခုမှာမျိုးဥထွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသာမန်မျိုးဥထွက်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဤအရပ်မှဟော်မုန်းမညီမမျှဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသော polycystic Ovary syndrome ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုငျသညျ။ သတငျးကောငျးကိုသူတို့မဆိုအခက်အခဲကြုံနေရပြီဆိုပါကတဦးတည်းထွက်ကုန်များကြက်ဥကိုနှုတ်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးပေးထားဆေးဝါးများရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကထိုကြောင့်, မျိုးဥထွက်ဖြစ်ပေါ်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်။
ဒီကတဆင့်, တဦးတည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်အောင်ဤအရပ်မှမှန်ကန်သောအချိန်ကိုက်စေနိုင်သည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော ဆေး Tamoxifen citrate အမှုန့် အကျိုးခံစားခွင့်ကထိရောက်စွာမျိုးဥထွက်လှုံ့ဆော်ရန်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကတဦးတည်းတဦးတည်းကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးလျှင်အတော်ကြာကြက်ဥထုတ်လုပ်ရန်ဖို့သားဥအိမ်လှုံ့ဆော်။ ကအားသာချက်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သော gonadotropin (ထိုးဆေးမျိုးဥထွက်ဆေး) ၏အသုံးပြုမှုကိုကဲ့သို့အကုန်အကျများနှင့်အန္တရာယ်များမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Clomid Nolvadex ကဲ့သို့တူညီသောအတန်းထဲတွင်ကျရောက်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးလေ့မထှနျးအမျိုးသမီး ovulatory မမှန်ကုသရာတွင်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကအတူတူပင်လမ်းအလုပ်လုပ်နှင့်အမျိုးသမီး၏ 65-75% အတွက်မျိုးဥထွက်သွေးဆောင်ကူညီရန်သက်သေပြခဲ့ကြသည်။ Clomid သို့သော်ပဋိသန္ဓေ ယူ. နိုင်ခဲ့ဤအရပ်ပု endometrial နံရံမ thinning တူသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကြွလာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံစာများသားအိမ်အပေါ် Nolvadex ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်ကြပြီ။
ဆေး Tamoxifen: အ Antiestrogen အပြင်ဂျွန်အေ Kellen, စာမျက်နှာ 1-201 အားဖြင့်
ဂျွန်အက်ဖ်က Kessler, Greg အေ Annussek, HarperCollins,6ဧပြီလ 1999, 1-208
လွတ်လပ်. Published ဆေး Tamoxifen ဒေါက်တာတိတု Marcus, 29thမတ်လ 2019, 1-18